"What's the difference between an oscillatory andatrepidatory earthquake?"
Oscillatory နဲ့ Trepidatory ဆိုတဲ့ မြေငလျင် လှုပ်ခပ်ပုံ နှစ်မျိုးအကြောင်း ရှင်းပြထားတဲ့ gamil fwdတစ်ခု လက်ခံရရှိခဲ့တာကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အထက်အောက် လှုပ်ခပ်တာကို Trepidatory Earthquakeလို့ ခေါ်ပါသတဲ့။
ဘေးတိုက် လှုပ်ခပ်တာကို Oscillatory Earthquakeလို့ ခေါ်ပါသတဲ့။
Trepidatory နဲ့ Oscillatory နှစ်မျိုးပေါင်းပြီး အထက်အောက်ရော ဘေးတိုက်ပါ လှုပ်ခပ်တာလည်း ရှိတတ်ပါသတဲ့။
လှုပ်ခပ်မှုသရုပ်ပြတဲ့ပုံတွေ မယဉ်မကျေး ဖြစ်နေရင် မျက်စိနဲ့မကြည့် နောက်စိနဲ့ ကြည့်ကြပါ။
ပညာရှင်များ နားလည်နိုင်မည့် သင်္ချာဖော်မြူလာ -
အရပ်သားများ နားလည်နိုင်မည့် သရုပ်ပြပုံများ -
| (Blank) |
Trepidatory + Oscillatory
ပို့စ်ရေးသားသူ Ashin Acara. ရက်စွဲ Tuesday, April 19, 2011